Thwebula Mozilla Firefox 50.1... – Windows – Vessoft
Thwebula Mozilla Firefox
Mozilla Firefox – isiphequluli ethandwa futhi fast nge technologies zanamuhla support. Isofthiwe inikeza ukuhlala ukhululekile sibonga internet kuya elula navigation bar, ukuvikelwa efanele ngokumelene spyware, ukupela, ukuphequlula yangasese amawebhusayithi, njll Mozilla Firefox has a isethi nezimo amathuluzi ukuze wenze isiphequluli for izidingo umsebenzisi. Isofthiwe ihlinzeka ngokubonisa efanele lewebhu kokuqukethwe kanye nokusakaza video. Mozilla Firefox iqukethe Ukukhetha eziningi izithasiselo anezela izici ezintsha kusiphequluli noma wandise akhona.
ikhasi ukulayisha Fast web
Isethi izilungiselelo nezimo
anezele Abaningi nezandiso
Amazwana on Mozilla Firefox:
Mozilla Firefox Ahlobene software:
English, Français, Español, Deutsch... Internet Explorer 11, 10 futhi 9
-Internet Isiphequluli eyisisekelo ohlelweni lokusebenza kusuka Microsoft. Isofthiwe kuhlanganisa amathuluzi for ukuhlala ntofontofo online.
isiZulu, English, Українська, Français... Opera 42.0.2393.94, 43.0.2442.7 beta futhi 44.0.2440 dev
English, Українська, Français, Español... Chromium 57.0.2985
-Internet Isethi ye-software ukuze enze imisebenzi yansuku zonke kuleli internet. Phakathi isofthiwe kukhona isiphequluli, imeyili iklayenti, media player, ukudluliswa kwedatha iklayenti njll
Pale Moon 26.1.1 Stable futhi Portable
Maxthon Cloud Browser 4.4.8.2000 futhi 4.9.3.200 beta; Standard futhi Portable
-Internet Isiphequluli Functional ne ewusizo izici esakhelwe. Isofthiwe isekela ukusetshenziswa yefu ubuchwepheshe kanye iqukethe izithasiselo ukuvimba ukukhangisa.
Abadlali Media Isidlali semidya nge iqoqo imisebenzi eyisisekelo. Isofthiwe isekela engezansi, search kokuqukethwe ku-YouTube futhi ukudlala of Shoutcast imifudlana.